Frank Leboeuf oo saadaaliyay in xiddig bar-tilmaameed u ah Real Madrid uu ku biirayo kooxda Chelsea – Gool FM
Dajiye August 3, 2021
(London) 03 Agoosto 2021. Xiddigii hore Chelsea ee Frank Leboeuf ayaa u sharaxay in daafaca reer France Jules Conde iyo kooxda Seville ee Jules Koundé, inuu ku biiro Blues inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Wargeys qaar ayaa waxay xaqiijiyeen dhoowrka maalmood ee soo socda in Chelsea ay wadahadalo xoogan la gali doonto Seville si ay ula soo saxiixato Jules Koundé, kaasoo sidoo kale bar-tilmaameed u ah kooxda Real Madrid xagaagan, si uu ugu noqdo badelka Raphaël Varane.
Frank Leboeuf ayaa sidoo kale aaminsan in Jules Koundé uu u noqon doono awood dheeri ah tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel, si uu ugu tartamo dhammaan koobab xilli ciyaareedka cusub.
Sida laga soo xigtay “ESPN” Xiddigii hore Chelsea ee Frank Leboeuf ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Koundé waa hubaal inuu yahay ciyaaryahan aad u fiican, iyo awood dheeri ah koox kasta uu ku biiro.”
“Waa dagaalyahan, marna ma quusto, wuxuu haystaa wax walba si uu noqdo kan ugu fiican, hubaal waa mustaqbalka.”
“Ma aqaano waxa uu Jules Koundé doonayo inuu hadda sameeyo, guud ahaan, booskiisa wuxuu ahaan doonaa kursiga keydka xulka qaranka France haddii uusan ka tagin kooxdiisa, waana mid isaga u taal.”
“Sidaas darteed waxaan u maleynayaa inuu heshiis aad u wanaagsan u noqon doonto Chelsea, waxaana hubaal ah inuu ka faa’iideysan doono ku biirista kooxda.”